. မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၁၅-၀၇-၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၁၅-၀၇-၂၀၁၅	14
. မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၁၅-၀၇-၂၀၁၅
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 15, 2015 in My Dear Diary | 14 comments
. မြသည် အင်မတန် အမြှောက်ကြိုက်သူ ဖြစ်သည်။
မနေ့က သင်ပုန်းထဲ ချစ်သော ကြောင်ကြောင် မှ “အဲလိုလေး တွေလဲ လုပ်စမ်းပါ” လို့ ချွန်သွားသည်။
သူကတော့ သူ့ အကြံဖြင့် လော်ဘီ ရန်ရှင်း အောင် တစ်ဖက်လှည့် ပြီး ပင့် ပြောခြင်းဖြစ်ပေသည်။
သို့သော် ထိုစကားသည် မြ အတွက်တော့ အားဆေးပေတည်း။
ငယ်တုန်းက နှလုံးသားကျိုးပျက်မှု များ ကို ပြန်ဖော်မည်။ တူးဆွ မည်။
အက်တစ်ဗ္ပိုင့် ဖြင့်တစ်နည်း ပက်စစ်ဗွိုင့် ဖြင့်တစ်ဖုံ ရေးမည် ဟု ပြင်ဆင်လေတော့သည်။
. မြ ၏ နှလုံးသားမြို့ဟောင်း တူးဖော်ချက် ပရော့ဂျက် ပေတည်း။
မရေးခင် လက်မတင်လေး “ယူ့ စာတွေချည်း ဘဲ ရွာထဲ ရှိနေပါတော့ လား” ဆိုသည့် စကားကြားလိုက်သည်။
ရွာထဲ ဝင်ပြီး တိတ်တိတ်ပုန်း စာဖတ်သူ တစ်ယောက် အနားတွင်ရှိနေ သည် ကို မေ့နေသည်။
သို့သော် သိပ်တော့ မသေချာ။
ဦးနီကုတ် အင်တာဗျူး စာ အကြောင်း ကို သိနေ၍ ဝင်ပြီး ဖတ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်သည်။
အမြဲတမ်း ဝင်ဖတ်နေ တာဟုတ် မဟုတ် မပြောတတ်။
ဒီ ရက် ထဲ လွမ်း ထားသော ဂျပန်ကား အကြောင်း သူ သိနေခဲ့၍ သာ တော်သေးသည်။
ထို ဂျပန်ကား ကို ရက်ဆက် ကြည့်ကြည့် နေတော့ ကြည့်လှချည်လား လို့ ပြောခဲ့၏။
သူ ဝင်ကြည့်တိုင်း ကိုရုပ်ဆိုး ကြီး နဲ့ချည်း တိုးတာမို့ မနာလိုဖြစ်နေပုံတော့ မရ။
မင်းသမီး ကလဲ သူ့ အကြိုက် ကက်သရင်းဇီတာဂျုံး ဘော်ဒီ လုံးကြီးပေါက်လှ ကိုယ်လုံး မဟုတ်၍ စိတ်ဝင်စားပုံမရ။
. နာအိုးတို အခန်း ကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ပြန် ရစ်ကြည့် နေတာ ကိုတော့ သိစရာ အကြောင်းမရှိ။
သူသည် အရင်တုန်းက တော့ စိတ်လို လျှင် မနာလိုတိုရှည် ဖြစ်သည်။
ဤ အသက်အရွယ် ရောက်နေသောအခါတွင်ကား ဂရုမစိုက်တော့သည် လဲ ဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မြတစ်ယောက် အတိတ်ကြောင်း တူးဖို့ ခက်ပြီ။
. မြသည် အရင်က ဗိုင်းကောင်း မကျောက်ဖိ သူ မို့ နဲနဲ တော့ ဆိုးခဲ့သည်။
ဒီအချိန်ကြီး တွင် အတိတ်ကြောင်း များမှ တစ်ဆင့် ရောဂါဟောင်း ပေါင်းစုံ ပြန်ထသွားလျှင် ခက်မည်။
ဟို ကြောင် မြှောက် ပေးသည် မှာ မိုင်ပေါင်း သုံးထောင့်လေးရာ့ငါးဆယ့်ကိုး အကွာ မှ ဖြစ်သည်။
သူ မြှောက်တိုင်း လိုက် က ၍ မဖြစ် ချေ။
လက်တစ်ကမ်း အကွာမှ ဓား ကို မြ ပိုကြောက်ရမည်။
ဤတွင် မြ ၏ နှလုံးသား မြို့ဟောင်း တူးဖော်ရေး ပရော့ဂျက် သည် ဒဂုံစီးတီး စီမံကိန်း ပရော့ဂျက် ကဲ့သို့ ဖျက်သိမ်း လိုက်ရပေတော့သည် တကား။
တစ်ခါတစ်ခါ ဝိုးတစ်ဝါး အမြင် က ပို၍ တင့်တယ်ပေ၏။
@QUIL@ says: thermal effect ထည့်ပြီး ရုပ်ဖျက်ထားတယ်လား..
မတို့ နဲ့ လှုပ်လိုက်ရမားးးးးးးးး
kai says: Invert လုပ်တာနဲ့တင်တော်တော်ပေါ်နေပြီ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒီမယ် ကိုယ်တော်နှစ်ပါး
ပုံရင်း မြင်ဖို့ ဂလောက်လွယ်တယ် တဲ့လားကွယ်။
တစ်လွဲ တွေ မြင်ပြီး ကိုယ် သုံးတဲ့ Software တွေ ရဲ့ နာမည် ကို မပျက်စေနဲ့ ကွဲ့။
Ha Ha Ha …. lol:-))))
Mike says: .အော်..မြ…မြ…မြ …တူးစရာမရှိတာကို တူးမယ်ကြံရသေး ..ဟေးဟေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: မိုက်မိုက် ကော်မန့်ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။
မြစပဲရိုး says: တောက်စ် .. မိုက် မိုက် မိုက်
. မြ ကို ဂလောက် အထင် စမော တယ်လား။
အဲ့ လူဆိုးမလေး ကလဲ ဘူ့ဘက် က နေနေ တာတုန်း။ တောက်စ်။ (ခွက်ဒစ် – ဂ)
လုံမလေးမွန်မွန် says: သများလည်း ရေတွင်းပျက်တွေ ရေးချင်တယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: အန်တီမြကို.. ဆံပင်ဆံထုံးကြီးနဲ့ ရှေးခေတ်အန်တီကြီး ပုံစံလို့ ထင်ထားတော့..
ပုံအရဆိုရင် ဆံပင်နဲ့ အကျီ ကီးကိုက်တော့ အတွေးလွဲသွားပြန်ရောဗျာ..။ ။ ကျွန်တော်တောင် ဘေးက ယာကူဇာဓါးမ ကိုကြောက်လို့..
ဖီလင်တွေပစ်ပြီး ယောင်စိန်လုပ်နေဒါပဲ ကြည့်ပါတော့ဗျာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
တောင်ပေါ်သား says: အရီးက အပြင်မှာ ပိုမိုက်တယ် ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 486
Swal Taw Ywet says: တနေ့ညက
တရာ့တကြိမ်မြောက် ချစ်ခွင့်ပန်ခြင်း ဂျပန်ကားလိုက်ရှာတာ
Princess and Photographer ဘဲကြည့်လိုက်ရသယ်။
Youtube ပေါ်က Documentary လေးတွေ ဘဲ ပြန်ကြည့်နေဖြစ်တုံးမို့
အရီးရဲ့ နောက်ကြောင်းပြန် မတင်ပါနဲ့အုံးခင်ဗျ။
တူမတော် ရဲ့ ဒေါ်လေးကလည်း မကြိုက်ဘူးပြောထားးးးးးလို့လို့။
မြစပဲရိုး says: လုံမ လေး
. ရေးချင်တာသာရေး။ စိတ်ထဲ ဖု နေရင် ထု သာပစ်။ ကြိတ် ခံစား မနေနှင့်။
ယာကူဇာမယ်လေး က ရွာ ကို သိလို့လား။
သိလဲ ပေါက်ကရ စာရေးခြင်း သည် စိတ်ကို ရွှင်လန်း အားဖြစ်စေ၏ လို့ ပြောပြီး ရေးပါကွာ။
အဲဒီ က အတွေ့အကြုံ လေး တွေ၊ ဒါ့ပုံလေး တွေ ပေါ့။
ဟိ ဟိ။ အမြှောက်ကြိုက် မြ တစ်ယောက် ပီတိ ဖြစ်စွာ အစိမ်းရောင်ချယ် ပြီဗျာ။ ကိုစွယ်တော် ရေ့
ကွပ်ပြစ်လေး ကို သတိတရ ပြန်လာတာ ဝမ်းသာလှပါဘီ။
အဲဒီကား အတွက် Youtube ထဲ က Link တွေ ပေးထား တယ်။ အချိန်ရရင် မြေလှန် ပေတော့။
ကိုစွယ်တော် ဘူသူ့ ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် ချစ်ခွင့်ပန်ထားခဲ့ဖူးလဲ။
Ma Ma says: မြရဲ့ မတူးဖော်လိုက်ရတဲ့ မြို့ဟောင်းကြီးမှာ ဘေးနားက ဓားသမားရဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေချည်း ထင်ပါရဲ့။ ဒီလောက်သဘောကောင်းတဲ့ မတ်တော်မောင်ကို ဓားလို့ ပြောတာ နည်းနည်းတော့ လွန်တယ်ထင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ..မြသင်ပုန်း
ဦးကျောက်ခဲ says: ဖယား… ဖယား… အဟောင်းတော့ မတူးနဲ့အရီး…
ကိုယ်တူးတဲ့တွင်းထဲ ကိုယ့်ကိုကန်ချပြီး မြကို ရာဇဝင်ထဲထားခဲ့မှ… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.